ရခိုင်က ခွဲထွက်ဖို့ကြိုးစားလို့ ဗမာစစ်တပ်က အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းလာရင် … | Dr Ko Ko Gyi's Blog
နိင်ငံခြားသားဖြစ်လို့ လက်မခံဘူးဆိုရင် ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို ကပ္ပိလ၀တ် ပြန်ပို့ဖို့ပဲရှိတော့တယ်( ဆရာတော် ဓမ္မစာရ) »
Maung Khin တွေးကြည့်တာလေ ဦးမျိုးရ။ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးပြန်ပေးရင်တောင် ရခိုင်က ဗမာကိုမုန်းတာပျောက်မသွားဘူး။ သူတို့ရဲ့ ထီးကျိုးစည်းပေါက်နန်းပျောက်ခဲ့တာ ဗမာကြောင့်လေ။ လက်ရှိ သူတို့ရဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ်အားလုံးဟာ ဗမာလက်ထဲမှာ သူတို့ခံစားခွင့်မရှိဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄၊၅ လလောက်က သံတွဲဘက်က ဗမာလုပ်ငန်းရှင်ပိုင်တဲ့ ရှပ်ပြေးယာဉ်တွေကိုမီးရှိူ့ပြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ မွတ်စ်လင်တွေကိုရှင်းထုတ်မယ်၊ပြီးရင်ကျန်တဲ့လူမျိုးစုတွေကိုမောင်းထုတ်မယ်။ လက်ရှိလည်း ရခိုင်ပါတီက ရခိုင်နိုင်ငံရေးကို ကျန်တဲ့တိုင်ရင်းသားပါတီတွေထက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်၊ စည်းလုံးမူ့က ကချင်တို့၊မွန်တို့၊ရှမ်းတို့ထက်သာတယ်။ ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကို ကချင်ကနေ ရခိုင်ကို ရွေ့နိုင်ရင်အတော်နီးစပ်လာပြီ။ ဒေါ်စုအလွန် (၂၀၂၀) ဗမာ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲမှာ ရုပ်လုံးပေါ်လာနိုင်တယ်။ အမေရိကားကလည်း ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ဗမာစစ်တပ်ကိုသူ့သြဇာခံဖို့ကြိုးစားရတာထက် ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတွေကို သြဇာခံဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားရတာပိုလွယ်မယ်။ ဥပမာ ရခိုင်က ခွဲထွက်ဖို့ကြိုးစားလို့ ဗမာစစ်တပ်က အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းလာရင် responsibility to protect (R2P or RtoP) အရ ယူအန်အလံထောင်ပြီး အမေရိကန်က စစ်ရေးအရ ဝင်ရောက်စွပ်ဖက်နိုင်တယ်လေ။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်စိုးမိုးရေး တရုတ်ကို ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ရေးဟာ အမေရိကန်အတွက် ဒီနည်းကအလွယ်ဆုံးပဲ။ တစ်ဘက်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို အိပ်ထဲထည့်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း မွတ်စ်လင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် အစ္စလာမ်မစ်ပါတီတွေ အများစုအနိုင်ရလာရင် သူ့မဟာမိတ်က အချိန်မရွေး ပျက်သွားနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ်တစ်ခုထဲမှာ တရုတ်နဲ့အမေရိကန် ပင်ပေါင် ဒစ်ပလိုမေစီ မစခင်တုန်းက ကမ္ဘာတဝှန်းက သတင်းထောက်တွေတွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုမှာမမျှော်လင့်တဲ့ထင်မှတ်မထားတဲ့ သတင်းနှစ်ခုကို (၁) တရုတ်နဲ့အမေရိကန် သံတမန်ဆက်ဆံရေး ပေါ်ပေါက်လာရမယ် (၂) (သိပ်တော့မမှတ်မိတော့ဘူး) ဟစ်တာလာပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုပြီး ခန့်မှန်းခဲ့ကြတယ်။ မဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးလေ။
Tags: Asia, Bamar, Burma, Myanmar, Rakhine, Rakhine State, United States, Washington
This entry was posted on September 8, 2013 at 5:03 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.